Top Volkswagen Touareg Facts - Tantara sy ny tena mahatalanjona
Pros & Cons: Ny tena mahavariana ny Touareg
Ny Touareg dia Volovolo voalohany fiara fiara efa-dàlana efa-dàlana efa-dàlana ho an'ny vahoaka malaza, ary namboarina ho mpitarika amin'ny SUV. Nampidirina tamin'ny taona 2004, ny tononkalo 2½ Tonareg dia tena mpikoka mafy tokoa tao amin'ny tsena fanatanjahan-tena.
Inona no mahatonga ny Touareg tokana?
Ny fonosana fananganana fiaramanidina (standard amin'ny V-10 version, safidy amin'ny dikan-teny hafa) dia manosika na mampidina ny fiara miankina amin'ny lalana sy ny haingam-piaramanidina ataonao. Azonao atao koa ny mavitrika amin'ny tanana.
Tonga miaraka amin'ny rafitra "4Motion maharitra rafitra fiara fitaterana rehetra" izay manasaraka ny toradro eo anelanelan'ny vava sy ny lamosina aoriana. Mety hivezivezy amin'ny 100% amin'ny herinaratra ho an'ny axe koa izy, arakaraka ny fepetra eny an-dàlana. Ankoatra izany, dia misy koa ny famolavolan-drivotra mavesatra ho an'ny seranan-tsambo.
Io no SUV voalohany manolotra milina roa miaraka amin'ny cylinder valo.
Miaraka amin'ny Volkswagen's Response Crash Responsive System, izay manokatra ny varavarana amin'ny fifandonana, manidy ny batterie, manidy ny solika sy ny fitaovana elektrika matanjaka, ary miantso OnStar amin'ny fiara misy an'io safidy io.
Raha oharina amin'ny tariby 4 sy 5 isaky ny mandeha dia manatsara ny fivoahana haingana sy ny toekarena i Touareg amin'ny 6-speed automatic transmission raha mampihena ny entona.
Ny automatique 6-speed dia tonga amin'ny "modia" sy "manilika" fitaratra, ary koa vavahadin-tseranana ho an'ny mpamily izay te-haka ny fitaovany.
Ny mahagaga indrindra dia ny fahaizan'ny Touareg amin'ny familiana fiara tsy manara-dalana. Tena fiaramanidina mitaiza tena izy io izay afaka miady amin'ny zava-drehetra ataonao eo, na dia eo aza ny fanorenana azy eo amin'ny sary.
Ny modely rehetra dia manome farafahakeliny farafahakeliny sy fialan-tsasatra 28 degre, tonga lafatra ho an'ny offroading.
Ny fanampim-panazavana mahazatra ao amin'ny faritry ny Console dia fitaovana fanamafisam-pahefana tafita. Manodidina ny haben'ny sigara ny sigara ary manome fahazavana mazava mandritra ny 13 minitra.
Touareg koa dia tonga amin'ny "fiakarana havoana" sy ny "descent". Ny singa fiakarana dia manakana anao tsy hiverina amin'ny tendrony mihetsiketsika rehefa tsy ao anaty fiara ianao, raha toa kosa ka ny fanentanana dia mamela ny mangatsiaka sy mivoatra any ambany kalitao tsy mihena.
Raha ny ankamaroan'ny rafitra fiara fitaterana an-tsambo dia afaka manampy anao hahita ny fiatoana manaraka eo amin'ny làlambe, ny Touareg dia hanampy anao hahita ny làlana hiverina any amin'izay nanombohanao. Izany dia tonga amin'ny fampiasana tsara rehefa mandeha fiarandalamby.
Pros: Ny antony tsara indrindra hananana VW Touareg
Cons: Ny zavatra ratsy indrindra momba ny VW Touareg
Ny Volkswagen Touareg dia mahazo aina sy eny an-kalamanjana. VOLKSWAGEN OF AMERIKA Pros & Cons: Touareg's most unique features The Touareg is Volvowagen's first four-wheel drive SUV for the public, and it was built as a leader in design SUV. Nampidirina tamin'ny taona 2004, ny tononkalo 2½ Tonareg dia tena mpikoka mafy tokoa tao amin'ny tsena fanatanjahan-tena.
Indro ny lisitry ny endri-javatra miavaka indrindra amin'ny Touareg izay heverin'ny maro ho anisan'ny antony lehibe ahazoan'ny Volkswagen Touareg:
Tsy toy ny SUV ianao, ny Touareg dia manararaotra ny fahaiza-miaina amin'ny lalambe ho an'ny SUV.
Tonga dia feno entana maro karazana.
Ny fonosana Extreme Offroad dia manamboatra fonosana fananganana rivotra ho an'ny zana-tany bebe kokoa, fitsangantsanganana ambony (hatramin'ny 34 degrees), hampitombo ny famolavolana fampakarana, takelaka fanampiny, ary kodiarana mahery kokoa.
Natao ho mora kokoa ny mandeha fiara rehefa betsaka.
Ny fitantanana dia mazava sy haingana. Na dia amin'ny fiovana mafy aza, dia misy volomborona vitsy kely.
Ny fonosana tsy manam-pahataperana miavaka dia manome fiarandalamby ho an'ny mpamily (hatramin'ny 11.8 santimetatra ho an'ny tany) mba hisafidianana - automatique na manuel. Fitsipika momba ny V-10, ary mendrika ny vidiny amin'ny dikan-teny hafa.
Touareg dia mametraka ny mari-pamantarana marina an-dàlam-be miaraka amin'ny fari-pifandraisana fahatelo telo.
Manaraka ny fenitry ny fanaraha-maso ny toetr'andro amin'ny dual zone.
Mora ny mameno zavatra ao amin'ny faritra entana entana, noho ny fisokafana ambany sy lafy malalaka.
Ny rafitra fanamafisam-peo 10-mpandahatra dia fitaovana am-pahendrena ao amin'ny Touareg.
Tandremo tsara amin'ny antsipiriany: Misy tsipika 12-volt ao amin'ny Touareg, ary faritra maro mitahiry.
Manana aterineto mpanankarena izy io ary mora mora ny mamaky sy mifehy izay mora ampiasaina.
Ny rafitra fiaramanidina dia manana endri-javatra tsy manam-paharoa, anisan'izany ny efijery tsy mitongilana izay maneho ny haavony, ny laharan-tariby sy ny latitude, ny toeran'ny kodiarana eo aloha, ny kômpà sy ny sata mifehy ny fifandonana.
Mahavariana ny fahaiza-manaon-tsambo 7.716 lavitrisa mahery noho ny an'ny SUV hafa ( Toyota 4Runner , Jeep Grand Cherokee , Dodge Durango, Ford Explorer ary Chevy TrailBlazer).
Tsy mihoatra noho ny toerana ao anaty efitrano ho an'ny mpandeha 5 izay misy efitra malalaka ho an'ny mpandeha an-tongotra roa na eo an-toerana, miaraka amin'ny seza mandeha amin'ny mpamily fiara dia manome fanitsiana hametrahana ny haben'ny vatana rehetra.
Ny fonosam-pandehanana an-dàlam-pandaminana dia ahitana komity mpamokatra rivotra izay afaka manenika ny tsipika amin'ny fisamboaran-trano iray, ary koa ny Touareg dia tonga miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso fanodinana fitaovam-piadiana.
Ankoatra ny takelaka fiarovan-tenan'ny fiarovan-doha efatra, ny Touareg dia tonga miaraka amin'ny takelaka mirefotra enta-mavesatra, ahitana ny fiarandalamby 6-piston Brembo, izay miteraka fihenam-bava mahavariana izay mety tsy hanjavona, ary koa ny BrakeAssist, Electronic Distribution Brakeforce, .
Ny fiakanjony sy ny fizotrany dia mifanindran-dàlana amin'ireo sedan-dandy sasany.
Misy karazan-tsakafo maro be, tsy hahatsapa fialan-tsasatra bebe kokoa amin'ity SUV ity ianao raha oharina amin'ny an'ny hafa ao amin'ny kilasy iray ihany.
Ny Volkswagen Toureg dia mahazo aina sy eny an-kalamanjana. VOLKSWAGEN OF AMERIKA Zavatra Tsara Ny Momba Ny Toerana VW Touareg Indro ny lisitry ny endri-javatra miavaka indrindra amin'ny Touareg izay heverin'ny maro ho anisan'ny antony lehibe ahazoan'ny Volkswagen Touareg:
Mahavariana ny fahaiza-manaon-tsambo 7.716 lavitrisa mahery noho ny an'ny SUV hafa (Toyota 4Runner, Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango, Ford Explorer ary Chevy TrailBlazer).
Ity misy lisitry ny sombim-panoherana ratsy indrindra ao Touareg (vitsivitsy, ny sasany tsy ampy) izay mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitrao TSY manana tompony Volkswagen Touareg:
Amin'ny toerana fifamoivoizana, ny rafi-navigatika dia afaka mahazo "misafotofoto" ary manome angon-drakitra diso, na dia mahita haingana sy manitsy ny fahadisoany aza izy.
Ny halavan'ny ampongabendanitra dia mety hanimba ny fahitana mankany amin'ny mpamily mora kokoa.
Sarotra kokoa noho ny SUV hafa ao amin'ny kilasiny.
Tsy misy safidy roa an-dàlam-pifandraisana.
Tonga miaraka amina lavitra lavitra noho ny fanakatonana ny varavarana. Ny bokotra dia tokony hajanona mandritra ny fotoana lava be tsy hay alaina mialoha ny fanesoana.
Ny mpizara CD changer-n'ny CD-nao dia hita any amin'ny faritry ny faritry ny entana, fa tsy eo amin'ny solosaina.
Ny halehiben'ny entana dia eo anelanelan'ny 31 kilaometatra miaraka amin'ny seza aoriana ary 71 kilaometatra rehefa ririnina.
Tsy toy ny an'ny SUV hafa, tsy mipetraka ny seza aoriana.
Touareg tsy manome seza fahatelo amin'ny seza, mametra ny fandefasana mpandeha dimy.
Ny seza aoriana dia mihodina, fa tsy mora, ary mila manaisotra ny loha loha.
Ny lava-bozaka matevina dia miorina tsara eo amin'ny varavarankely, izay mitaky ny mpandeha mpandeha mitsidika mba hitandrina ny fidirana sy hivoaka.
Tsy misy bokotra samihafa "off" ao amin'ny fanaraha-maso ny alàlan'ny toetr'andro.
Ny rafitra fanovozan-kevitra dia miorina amin'ny CD, na dia misy CD aza mandrakotra ny US kontinanta
Ny Volkswagen Toureg dia mahazo aina sy eny an-kalamanjana. VOLKSWAGEN OF AMERICA Zavatra ratsy momba ny VW Touaregs Ity lisitra sasany misy ny toetran'i Touareg izay tena ratsy indrindra (ny sasany lehibe, ny sasany tsy ampy), izay mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitrao TSIA amin'ny Volkswagen Touareg:
10 Mponina goavambe lehibe eo ambanin'ny $ 10,000
Storm avy amin'ny Masoandro: Ahoana no fomba hamoronana azy ireo sy ny zavatra ataon'izy ireo?
Ny famaritana ny fanambadiana eo amin'ny sosiolojia
Fantaro ny fomba ampiasana ny Preposition frantsay "Par"
12 Mampiditra andininy ao amin'ny Baiboly momba ny fanatanjahan-tena
History of Acoustic and Electric Guitars
Ny The Cherokee Princess Myth
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Italia
Fampitandremana an'i Miranda sy ny zonao
Ady amin'ny ady an-trano Espaniola: Battle of Blenheim
Hanomboka tsara kokoa ny tanjona - Ny tena zava-miafina
Jereo ny UFO Triangle
Zemis - Objets d'habitudes de la Taino Ancient de la Nosy Karibeana
Revolisiona Amerikana: Jeneraly Jeneraly Francis Marion - The Swamp Fox
Famaritana Oxyacid sy ohatra
Torolàlana ho an'ny sehatra rehetra ao amin'ny 'Hamlet'
Amin'ny fampiasana mpanampy sy mpaninjara (VB6)
Inona no atao hoe Theism? Iza ireo mpandray anjara? Finoana an'Andriamanitra sy Andriamanitra
Albion College GPA, SAT sy ACT Data
Arovana ny Polisy
Fanavotana any Washington University